Etu ị ga-esi gbakọọ nlọghachi na ntinye ego gị na Social Media | Martech Zone
Dika ndi na ere ahia na mgbasa ozi mgbasa ozi di ka ndi tozuru oke, anyi na achoputa otutu ihe banyere uzo na uzo nke itinye ego na mgbasa ozi. Ga - ahụ na m na - akatọkarị atụmanya nke ndị na - ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta - mana nke a apụtaghị na m na-akatọ usoro mgbasa ozi. Ana m echekwa ọtụtụ oge na mbọ site na isoro ndị ọgbọ na-ekerịta amamihe ma na-ekwukwa okwu n'etiti ụdị ndị dị n'ịntanetị. M enweghị obi abụọ ọ bụla na m oge nọrọ na-elekọta mmadụ media kemgbe ihe ịrịba ego maka m ụlọ ọrụ, m n'akwụkwọ, na ọrụ m.
Ihe iseokwu a bụ okwu gbasara ma atụ ma nnwale. Nke a bụ otu ihe atụ: Onye ahịa na-eme mkpesa site na Twitter na ụlọ ọrụ ahụ zara ozugbo, na-edozi okwu ahụ nke ọma maka onye ahịa n'ụzọ ziri ezi na n'oge. Ndị ahịa ahụ na-ege ntị na-ahụ omume ahụ ma nwee mmetụta dị mma banyere ụlọ ọrụ ahụ ugbu a. Kedu otu ị ga-esi tụọ nloghachi ahụ na itinye ego? Ka oge na-aga, ị ga-enwe ike ịlele mmetụta nke ika gị yana ịkọwa nke ahụ na mkpokọta ego na njigide… mana ọ dịghị mfe.
44% nke ndị CMO na-ekwu na ha enwebeghị ike ịlele mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na azụmahịa ha. Agbanyeghị, ọ ga-ekwe omume maka ụlọ ọrụ niile
Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ chọrọ ịlele mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ROI site na itinye aka na nbudata, ngosi, ndebanye aha, ma ọ bụ ire ere iji melite Tweet ma ọ bụ Facebook. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ nke kachasị ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi mmekọrịta ROI, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya. Your nwere olile anya ị na-aga na mgbasa ozi mmekọrịta iji zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị? Enwe obi abụọ na ọtụtụ ụlọ ọrụ - ọ bụ ezie na ọ na-eme site n'oge ruo n'oge.
Nzọụkwụ 4 iji tụlee nloghachi na mbugharị nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta
Buru n'uche na ị nwere ike ị gaghị enwe ndị a n'oge ị kpebiri ịmalite mmụba. O nwere ike ịchọ ka ịtọ ntọala na mmefu ego iji rụọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ dịkarịa ala ọnwa ole na ole iji chọpụta ihe nloghachi gị bụ.
Kọwaa Ihe Mgbaru Ọsọ A Pụrụ Ime - O nwere ike ịdị nfe dịka mmata ụlọ ma ọ bụ gaa n'ihu na njikọ aka, ikike ụlọ, ntughari, njigide, mbilite, ma ọ bụ imeziwanye ahụmịhe ndị ahịa.
Kenye Uru na Omume nke ọ bụla - Nke a bụ ọrụ siri ike, mana kedụ uru ọ bara ịkụziri ndị ahịa, itinye aka na ijere ya ozi na mgbasa ozi mmekọrịta? Ikekwe kewapụ atụmanya gị na ndị ahịa gị - na-atụle ndị na-eso ma soro gị rụọ ọrụ na ntanetị yana ndị na-anaghị. Enwere njigide dị elu? Enwekwu ohere? Ngwa ngwa ngwa imechi? Nnukwu ibu nkwekọrịta?
Gbakọọ ụgwọ nke mgbalị gị - Olee otu oge ọ chọrọ na kedu ka nke ahụ si sụgharịa onye ọrụ na njikwa na-akwụ ụgwọ? Ego ole ka imefu na nyiwe iji jikwaa mgbasa ozi mmekọrịta? Ego ole ka ị na-emefu mgbe ịkwụghachi ma ọ bụ wepu nsogbu ndị ahịa? You na etinye ego ọ bụla na nyocha, ọzụzụ, nzukọ, wdg. Achọrọ itinye ya na nchịkọta ROI ọ bụla.
Kpebisie ike na ROI - ((Enwetara ego niile na Social Media - Ọnụ Ahịa Social Media) x 100) / Ọnụ Ahịa Social Media.
Nke a bụ ozi infographic zuru ezu site na MDG, na-ekpuchi otu esi akọwapụta ebumnuche nwere ike ịtọ, na-ekenye ọrụ ọ bụla uru, yana ịgbakọ ọnụ ahịa nke mbọ gị niile Etu esi tụọ Social Media ROI:
Tags: infographicmdzlaghachi azụmaahịaROIelekọta mmadụ media edinamọrụ mgbasa ozi ọhana-elekọta mmadụ media na-erielekọta mmadụ media infographicelekọta mmadụ media roielekọta mmadụ media uru